Ahoana ny fomba hanatsarana ny ankamaroan'ny biraonao amin'ny fifindra-monina finday | Martech Zone
Amin'ny maika hamihina ny finday, mora ho an'ny orinasa ny manao tsirambina ny tranokalan'izy ireo, fa ny ankamaroan'ny fiovam-po dia mitranga hatrany amin'ny alàlan'ity fomba ity, noho izany dia tsy tsara ny tsy miraharaha tanteraka ny tranokalanao. Ny scenario tsara indrindra dia ny fananana tranokala ho an'ny sehatra maro; aorian'izany, olana ny manapa-kevitra raha te hanana tranokala mitokana ianao, tranokala mamaly izay mandika ny firafitry ny birao amin'ny finday, fampiharana finday miorina amin'ny asa, na vahaolana hybrid.
Mitohy hatrany amin'ny Skyrocket ny statistika momba ny fampiasana finday
71% amin'ny fitambarany minitra nomerika nandany tamin'ny Internet any Etazonia dia avy amin'ny finday. Miakatra hatramin'ny 75% izany any Mexico ary 91% ny fahatezerany any Indonezia. Mandeha kely any aoriana ny UK amin'ny 61%.
Any Etazonia dia mandany salanisa ny olon-dehibe 87 ora isam-bolana amin'ny Internet amin'ny finday avo lenta raha oharina amin'ny birao.
Efa ho 70% ny olon-dehibe amerikanina ampiasao ny sehatrasa desktop sy finday, miaraka amin'ireo laharam-pahaizan'ny mpampiasa biraonao sy ny finday ihany no mihodinkodina manodidina ny marika 15%.
Zava-dehibe ny manamarika amin'ireto antontan'isa ireto fa tsy izy rehetra no miova avy amin'ny birao mankany amin'ny finday… ny ankamaroan'ny fihetsiky ny mpampiasa anay dia mifindra mankamin'ny birao sy ny finday. Ohatra, matetika aho miantsena amin'ny vokatra an-tserasera amin'ny alàlan'ny findaiko rehefa mijery tele. Saingy tsy tena manao ilay fividianana aho mandra-pahitako ny vokatra eo amin'ny birao izay ahitako antsipirihany bebe kokoa amin'ny sarin'ny vokatra, sns.
Ny mifanohitra amin'izany no marina. Imbetsaka ny olona any am-piasana no mahita lahatsoratra na vokatra an-tserasera, avy eo hitahiry azy ireo amin'ny findainy hijerena azy avy eo. Na dia lasa mandeha aza ny finday, tsy foana ny toerana misy anao.
Satria lasa fitaovana fampifandraisana manan-tsaina amin'ny fampiharana finday ny fanerena finday, ny fifandraisana eo an-tsaha ary ny geolocation. Ohatra iray amin'izany ny fivarotana lehibe any Kroger. Mampandre ahy eo noho eo ny rindranasan'izy ireo rehefa mandeha eo am-baravarana mankany Kroger eo an-toerana aho ary mampahatsiahy ahy ny hanokatra ny rindranasa sy hitady manokana. Tsy izany ihany fa ny lisitr'ireo vokatra ao aminy koa dia milaza amiko izay làlan-kaleha hitako ny vokatra ao. Io fikendrena sy fotoana io dia natsangana tamina fampiharana, fa tsy dia marina foana amin'ny alàlan'ny tranokala finday.
Ity infographic avy amin'ny ERS, ekipa misahana ny serivisy fanohanana IT, mifanakalo hevitra momba ireo safidy isan-karazany hodinihina rehefa mifindra toerana amin'ny tranokalan'ny birao ianao ary manatsara izany amin'ny finday. Miresaka ihany koa ny raharaham-barotra mety maniry hikendry finday amin'ny tranokala finday misaraka tanteraka, tranokala izay mamaly na finday na birao, rindranasa finday, na vahaolana hybrid iray avy. GoDaddy, ohatra, dia manana rindrambaiko finday tsara antsoina hoe Mpamatsy vola izay manamora ny fahitan'ny olona liana amin'ny sehatra sy mividy azy ireo… vokatra iray io nefa mora kokoa noho ny tranonkala ampiasaina.
Tags: toro-hevitra momba ny famolavolanafifindra-monina finday biraoersvahaolana finday hybridSary torohayfinday fampiharanafampiharana findaytorohevitra famolavolana findaystatistika findayfinday mankany amin'ny fifindra-monina amin'ny biraotranokala findaytranokala mandray andraikitra
Soso-kevitra 5 momba ny fomba hampiasana ny hevitry ny mpanjifa media sosialy